बलात्कार विमर्श- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मुलुकी ऐनमा बलात्कार शब्द छैन । यस्तो प्रवृत्तिको अपराधलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ भनी उल्लेख छ । के ‘बलात्कार’ र ‘जबर्जस्ती करणी’ले एउटै अर्थ बोक्छ ?
श्रावण २४, २०७५ सम्झना वाग्ले भट्टराई
काठमाडौँ — कतिपय घटना र यिनका पृष्ठभूमिका अगाडि तथ्यांकहरू निरीह लाग्छन् । तथ्यहरू आफैं छरपस्ट र डरमर्दा हुन्छन् । जस्तो– पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका बलात्कारपछि हत्याका यस्ता छन्, जसले हाम्रो समय र समाजको कुरूप तस्बिर देखाइरहेको छ ।
समाचार बन्नै नसकेका यस्ता वीभत्स तस्बिर र चित्कारहरू कति होलान्, जसको कुनै हिसाब छैन । त्यसैले म यस लेखमा यस्ता क्रूरताको घट्दो वा बढ्दो तथ्यांक उल्लेख गर्न गइरहेको छैन ।
केही वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्रीले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि संक्रमणकालमा स्वाभाविक हो भन्दै सामान्यीकरण गरेका थिए । अहिले उनले भनेजस्तो संक्रमणकाल छ/छैन, सरकार जानोस् । तर यस्ता घटनामा सरकार चुपचाप छ । सुरक्षाको जिम्मेवारी भएको गृह मन्त्रालयले मौनता साँधेको छ । सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा आवश्यक आवाज उठाएका छैनन् । बरु एक महिला सांसदले त ‘सरकारलाई असफल पार्न बलात्कारका घटना घटाइएका हुनसक्ने’ जस्तो दिक्कलाग्दो कुतर्क गरिन् । यसले जिम्मेवार स्थानमा रहेकाहरूले घटना र प्रवृत्तिको गम्भीरता नबुझेको प्रस्ट हुन्छ ।
हाम्रो समाज र सभ्यता के यस्तै क्रूरताबाट गुज्रँदै आएको हो ? सतहमा नआए पनि समाजमा यस्तो बर्बरता पहिले पनि थियो वा पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो ? वा सूचनाका स्रोतहरूको वृद्धिले यस्ता नृशंसताहरू समाचार बन्नसकेका हुन् ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यसो त अझै पनि हाम्रो समाजको चरित्र बलात्कारजस्तो क्रूर अपराध पनि ढाकछोप गर्ने किसिमको छ । प्रहरी प्रशासनले पनि त्यसैलाई मलजल गर्ने गरेका दृष्टान्त हामीसामु प्रशस्त छन् ।
पछिल्लो समय विशेषगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा बलात्कारबारे प्रशस्त बहस हुने गरेका छन् । बलात्कार अपराध हो भन्नेमा विमति नभए पनि कस्तो अपराध भन्नेमा भने मतैक्य छैन । यसै पृष्ठभूमिमा मुख्यत: शिवलिङ्गलाई प्रतीक बनाएर बहसहरू भएका छन् ।
यस सन्दर्भमा बलात्कार आफैंमा यौनजन्य हिंसामात्र हो वा त्योभन्दा बढी केही हो ? बहस आवश्यक छ ।
डरलाग्दो सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको तथा बहसको केन्द्रमा रहेको ‘बलात्कार’ शब्द नेपालको मुलुकी ऐनमा राखिएको रहेनछ । मुलुकी ऐनमा यस्तो प्रवृत्तिको अपराधलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ भनी उल्लेख गरिएको छ । के ‘बलात्कार’ र ‘जबर्जस्ती करणी’ले एउटै अर्थ बोक्छ ? नेपाली बृहत शब्दकोश (२०४०) ले करणीलाई : १. बलात्कारका साथमा गरिने गैरकानुनी सम्भोग, २. सम्भोग, मैथुन, (प्राय: अविवाहितहरूका बीच) भनी अर्थ्याएको छ ।
त्यस्तै बलात्कारलाई : १. जबर्जस्ती गर्ने काम, अन्याय अत्याचार, २. कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छा विरुद्ध जबर्जस्तीसँग सम्भोग गर्ने काम, बलपूर्वक सतित्व नष्ट पार्ने काम भनेको छ । यसरी हेर्दा शब्दहरूले आफैँमा स्पष्ट अर्थ बोकेका देखिँदैनन् । सायद शब्दहरू आफैँमा पूर्ण हुँदैनन्, तिनलाई समय र परिस्थिति अनुसार बुझिदिनुपर्छ ।
बलात्कारको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । यसमा स्पष्ट दुई धार देखिन्छन् । एक धारले बलात्कारलाई पितृसत्ताको विकारका रूपमा लिने गर्छन् । अमेरिकी पत्रकार, लेखिका तथा अधिकारकर्मी सुशन ब्राउनमिलरले ‘हाम्रा इच्छाहरूको विरुद्ध’ पुस्तकमा बलात्कार महिलालाई नियतवश आफ्नो हैकममा राख्ने पुरुष प्रवृत्तिद्वारा निर्दिष्ट अपराध हो भनेकी छन् । उनका अनुसार बलात्कार यौन कम र पुरुष हैकमको उन्माद बढी हो ।
अर्को धारले बलात्कारलाई यौनप्रेरित हिंसाको रूपमा लिने गर्छ । कतिपय त यसलाई हिंसाको रूपमा पनि लिन नहुने बताउँछन् । छोटा र पारदर्शी लुगा लगाएर महिलाहरू नै पुरुषलाई बलात्कारको लागि आमन्त्रण गर्छन् भन्नेहरू पनि छन् । थ्रोनहिल र पाल्मरले ‘बलात्कारको एक प्राकृतिक इतिहास : यौन उत्पीडनको जैविक आधार’ पुस्तकमा बलात्कारलाई विशुद्ध यौनिक क्रियाकलाप भन्दै यसलाई डार्बिनको विकासवादसँग जोडेका छन् ।
नेपालमा भएका बलात्कारका घटना र प्रवृत्ति हेर्दा उत्पीडन र बर्बरता बढी लाग्छ । पछिल्ला घटनाहरूमा अबोध बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन् भने बलात्कारपछि हत्या गर्ने शृङखला बढ्दो छ । हप्तौँसम्म बन्धक बनाएर पालैपालो बलात्कार गरेका घटना पनि बढेका छन् । यसले बलात्कारलाई क्षणिक यौन उन्मादभन्दा पनि आपराधिक मानसिकताको उपजको रूपमा लिनुपर्छ ।
गतसाता मात्र समाचारमा आएको ‘यो केटी फुर्ती गर्छे, हामीलाई टेर्दिन....’ भनेर सामूहिक बलात्कार र हत्या गर्ने योजना बनाएको (हेर्नुहोस्, बलात्कारपछि बर्बर हत्या, कान्तिपुर, १७ साउन २०७५) तथ्यले बलात्कार यौनभन्दा बढी अर्कै केही आपराधिक क्रियाकलाप भएको तर्कमा बल पुर्‍याउँछ । यौन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बदलामा आफ्नो श्रेष्ठता देखाउन पुरुष अहम् हावी भएको देखिन्छ ।
बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसामा हाम्रो समाजको पुरुष मनोविज्ञान निश्चय नै बढी जिम्मेवार छ । यौनलाई खरिद गर्न सकिने र खरिद गर्न नसके जबर्जस्ती भए पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने पुरुष मनोविज्ञानले यौनजन्य हिंसा बढाएको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा घोषित ठाउँहरू नभए पनि अनौपचारिक रूपमा बजारमा यौन खरिदका लागि प्रशस्त ठाउँहरू छन् । तर किन बलात्कारी पुरुषहरू कमजोर र अबोध बालिकालाई सिकार बनाउँछन् ? अपराधी मनोविज्ञान साथै कमजोर शासन व्यवस्था र कमजोर दण्ड प्रणालीको कारणले यसो भएको हो ।
समाजशास्त्रीहरू बलात्कारलाई एउटा घिनलाग्दो अपराधमात्र होइन, बरु समाज अस्वस्थ भएको प्रमाण मान्छन् । त्यस्तो समाज जहाँ त्रासदी व्याप्त हुन्छ र महिलाप्रति सम्मान अभाव हुन्छ । निकोलश ग्रोथ बलात्कारका मुख्य तीन कारण देख्छन् : परपीडक स्वभाव, बदलाको भावना र शक्ति प्रदर्शन । उनका अनुसार मनोरोगीले गैरयौनिक चाहना पूरा गर्न गर्ने यौनजन्य हिंसा बलात्कार हो । काठमाडौंमै आमासँग बदला लिन छोरीको बलात्कार र हत्या गरेको पुष्टि भएको समाचार सार्वजनिक भैसकेको छ ।
घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन्, बलात्कार उन्मादपूर्ण वासनाको कारणमात्र होइन, बरु महिला माथिको नियन्त्रण र घृणाको अपराधपूर्ण अभिव्यक्ति हो । विभिन्न अध्ययनहरूले बलात्कारमा आवश्यकता बढी बल प्रयोग र हिंसा हुने गरेको देखाएका छन् । यसले पनि यसमा यौनभन्दा पनि रिस र आवेग तथा आपराधिक मानसिकता बढी भएको प्रस्ट हुन्छ । नत्र हरेक मान्छेमा यौन चाहना हुन्छ, तर सबैले बलात्कार त गर्दैनन् नि ।
बलात्कार समग्र समाज र सभ्यताको कलंक हो । स्वस्थ समाज बन्न हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान चिन्तन फेरिनैपर्छ । पीडितले होइन, बलात्कारीले समाजमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरौँ । अनि बलात्कार विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा सरकार कठोर हुनैपर्छ । महिला सम्मानको विषय अभियानको रूपमा अघि बढाउनैपर्छ । बलात्कार विरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउने अभियानमा महिलामात्र होइन, पुरुष सहभागिता पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ । बलात्कार मानव सभ्यताको क्रूरता र बर्बरताको घिनलाग्दो अभिव्यक्ति हो, जहाँ अयौनिक उन्मादको प्रस्तुतिमा यौन मुछिएको हुन्छ । विषयलाई नबहकाऔँ ।
बलात्कार लिङ्गले होइन, एउटा क्रूर अपराधीले गर्छ । त्यसैले बलात्कार र बलात्कारीको विरोध गरौं । कठोरभन्दा कठोर सजाय हुने कानुन निर्माण र यसको प्रभावकारी कार्यान्यनका लागि आवाज उठाऊँ, दबाब सिर्जना गरौँ । महिला सम्मान र सहअस्तित्वको लागि अभियान चलाऔँ । सानैदेखि छोराछोरीलाई असल संस्कार सिकाऔँ । तर प्राकृतिक लिङ्गमाथि अप्राकृतिक बहस नगरौँ । जीवित इकाइको अस्तित्व सुरु भएदेखिको यौन सम्बन्ध र आपसी मायाको उच्चतम अभिव्यक्तिको रूपमा रहेको सम्भोग (समभोग) लाई घृणा गर्ने कृत्रिम आडम्बर नगरौँ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:२७
बालबिहेले बिथोलेको जीवन
श्रावण ८, २०७५ सम्झना वाग्ले भट्टराई
काठमाडौँ — चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाको हात्तीवाङमा हामी पुग्दा विष्णुमायालाई हतार थियो । चिटिक्क लुगा र मेकअपमा ठाँटिएकी उनी कसैको प्रतीक्षामा थिइन् । भान्साबाट खानाको मिठो बास्ना आइरहेको थियो । उनका आँखा अधैर्य थिए र तारन्तार बाटोतर्फ कसैलाई खोजिरहेका थिए ।
विष्णुमाया उमेरले २८ वर्ष लाग्दै थिइन् । अनुमान गरौं, घरमा एक्लै उनको प्रतीक्षा कसको लागि थियो होला ? के प्रेमी उनलाई भेट्न घरमै आउँदै थिए ? के हाम्रो उपस्थितिले उनको प्रेमीसँगको एकान्तलाई बाधा हाल्दै थियो ? उनका ती आँखा नवविवाहित छोरी–ज्वाइँ आगमनको प्रतीक्षामा रहेछन् । उनकी १४ वर्ष पुग्न ४ महिना बाँकी रहेकी छोरी प्रेमबिहे गरेर आमा भेट्न आउँदै थिइन्, ज्वाइँसँगै ।
यो अपवाद घटना होइन । चेपाङ समुदायको बाहुल्य भएको यस गाउँपालिकामा बालविवाह गर्ने प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । कान्छो जिल्ला नवलपुर (तत्कालीन नवलपरासी जिल्ला राज्य पुन:संरचनापछि अहिले नवलपुर र नवलपरासी दुई जिल्लामा विभक्त छ) को पहाडी बस्ती डेढगाउँको एउटा होटलमा खाना खाने क्रममा खाना थप्न आएकी एक फुर्तिली नानीले पछाडि पिठ्युँमा सानो बच्चा बोकेकी थिइन् । त्यो उनकै बच्चा थियो । मैले ती बहिनीसँग कुरा गरेँ ।
उनले १३ वर्षको उमेरमा उनले १५/१६ वर्षको केटासँग भागीविवाह गरेकी थिइन् । भरतपुर बसेर ज्याला मजदुरी गर्दागर्दै उनी गर्भवती भइछिन् । ‘म काम गर्न नसक्ने भएपछि श्रीमान रिसाउन थाल्यो । रक्सी खाएर पिट्न थाल्यो । अन्तिममा डेरा आउनै छाड्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘दुई सातासम्म नआएपछि म घर गएँ । सासुले पस्नै दिनुभएन । श्रीमानसँग भेट भएन । त्यसपछि माइत गएँ । छोरा त्यहीँ जन्मियो ।’ छोरा ३ महिनाको भएपछि उनी एक्लै भरतपुर गएर अर्कोसँग बिहे गरिछिन् । त्यसपछि होटलमा काम थालेकी उनले भनिन्, ‘छोराको पनि जिम्मेवारीले केही नसोची दोस्रो बिहे गरेँ ।’
बच्चाले बच्चा जन्माएपछिको विडम्बना !
इच्छाकामना गाउँपालिका चितवनकी एक किशोरीले आफ्नो कथा सुनाइन्, ‘१३ वर्षकी थिएँ, स्कुल पढ्थेँ । फुपू कम उमेरमै बित्नुभएको थियो । ३५ वर्षका पुसाईं (फुपाजू) लाई सम्झाउँदै बुबाले जेठी छोरी दिन्छु भन्नुभएको थियो रे । त्यही वचन राख्न बुबाले पुसाईंसँग मेरो बिहे गरिदिनुभयो । बिहेपछि पढाइ छुट्यो । पुसाईंसँग बस्न मन लाग्दैनथ्यो । कहिले कता कहिले कता बस्थेँ । बिहेको एक वर्षपछि यस्तै रहेछ भनेर पुसाईंसँगै बस्न थालेँ । ३ छोरा जन्मिए । पछि सानातिना कुरामा झगडा पर्न थाल्यो । अहिले छुट्टै बसेको छु । गुजारा चलाउन के गर्ने थाहा छैन ।’
गत वर्षे फागुनमा सुर्खेत सहारेको दलित बस्तीमा पुग्दा भेटिएका सबैजसो महिला १३/१४ वर्षमै बिहे गरेका र १५ वर्ष पुग्दा–नपुग्दै बच्चा जन्माइसकेका भेटिएका थिए । त्यस्तै डडेलधुराको दोबाटेमा भेटिएकी १९ वर्षीया किशोरी भेटिएकी थिइन् । उनका तीन छोराछोरी थिए, पहिलो छोरा ५ वर्षको भने पछिल्लो काखकी छोरी ४ महिनाकी ।
यी बालबिहे र त्यसपछिका परिणामका केही तस्बिर हुन् ।
नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे, २०१६ अनुसार नेपालमा महिलाको पहिलो विवाहको औसत उमेर १७.९ वर्ष छ । यस प्रतिवेदन अनुसार २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा, ५२ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा र ७१ प्रतिशत महिलाले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेका छन् । पुरुषको सन्दर्भमा भने यो क्रमश: ३ प्रतिशत, १९ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा १०–१८ वर्ष उमेर समूहका ५९ लाख ९५ हजार १ सय १३ जनामध्ये ३ लाख ४२ हजार ७ सय ४६ जना (५.७ प्रतिशत) को १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको देखिन्छ । १०–१८ वर्ष उमेरभित्र विवाह गर्नेमा सबैभन्दा बढी मधेसी (१०.२ प्रतिशत), मधेसी दलित (१०.२ प्रतिशत), पहाडी दलित (७.८ प्रतिशत), पहाडी जनजाति (५.६ प्रतिशत) र मधेसी जनजाति (५.२ प्रतिशत) छन् । यस उमेर समूहमा विवाह गर्नेमा सबैभन्दा कम पहाडी बाहुनमा २.४ प्रतिशत र त्यसपछि नेवारमा २.६ प्रतिशत छ ।
त्यसो त विवाह व्यक्तिको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर पनि विवाहलाई व्यवस्थित गर्न हरेक देशले विवाहयोग्य उमेर कानुनमै तोकेको हुन्छ । नेपालको कानुनले २० वर्षलाई न्यूनतम विवाहयोग्य उमेर मानेको छ । संविधानले बाल विवाहलाई बाल अधिकार हननका रूपमा लिएको छ । संविधानको धारा ३९ (५) ले बालविवाह गर्न नपाइने भनी यी कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि बाल विवाहको अवस्था र त्यसको परिणाम भयावह छ । सुदूर पश्चिमको डडेलधुरादेखि चितवतनसम्मका माथि उल्लेखित प्रतिनिधि घटनाले बाल विवाहको चरित्र र परिणाम एकै किसिमको रहेको देखाउँछ । बालविवाह आफैमा समस्या हो वा होइन, बहसको विषय होला, तर त्यसबाट सिर्जित परिणाम भने दु:खद छन् ।
किशोर–किशोरीमा यौनजन्य उत्सुकतालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बालविवाह बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समयम सञ्चारका माध्यमको बढ्दो प्रयोग र यसमार्फत यौनजन्य सामग्रीमा सहज पहुँचले पनि उनीहरूलाई कम उमेरमै यौन तथा बिहेतर्फ आकर्षित गरेको देखिएको छ । बाल विवाहका परिणामस्वरूप व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित हुने, शिक्षाको अभावमा रोजगारीको अवसरका विकल्प कम हुने, परिणामत गरिबीको दुष्चक्रमा पँmस्ने गरेको देखिन्छ । सानै उमेरमा बिहे गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य र समग्र जीवनमात्र होइन, जन्मने बच्चाको जीवन तथा भविष्य जोखिमपूर्ण हुनसक्ने यथार्थ बुझ्न नसक्दा किशोर–किशोरीले बिहे गरेको देखिन्छ । बाल विवाह गरेकाहरू आमाबुबा बनेपछि पछुताउँछन् । तर ढिलो भैसकेको हुन्छ । कानुनले बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष कायम गर्नुको औचित्यसहित जनचेतनामूलक कार्यक्रम किशोर–किशोरी र तिनका अभिभावक लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नु उपयोगी हुन्छ ।
समाजमा समस्या छ, त्यसैले त समाधानको बाटो खोज्नैपर्ने भएको छ । समस्याको जरामा गरिबी छ । गरिबीले शिक्षासम्मको पहँुचमा अवरोध पुर्‍याउँछ । शिक्षाको अभावमा चेतना स्तरमा कमी आउँछ । चेतनाको अभावले सामाजिक समस्या सिर्जित हुने गर्छन् र ती समस्याबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने उपाय पनि भेटिँदैन । गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभाव एकअर्कामा नछुट्टिनेगरी जेलिएका हुने रहेछन् । गरिबीको यस्तो दुष्चक्रबाट बाहिर नआउँदासम्म यस्ता समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छन् ।
अन्त्यमा, चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको इच्छाकामना गाउँपालिकाको काउलेको चर्चा पहिल्यै सुनेकी थिएँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकपटक चर्चा चलेको थियो कि त्यहाँ १/२ वर्षका बच्चालाई जाँड वा रक्सी खुवाउँछन् रे, ताकि आमाबुबा काममा जाँदा बच्चा सुतिरहुन् । अहिले आफ्नै आँखाले देखेर आएँ । यस्तो जीवन बाँच्न अभिशप्त नेपालीलाई पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा’ले छोओस् ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०७:५४